Beesha Murusade iyo Shariif Xasan oo ay ka tafantahay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Beesha Murusade iyo Shariif Xasan oo ay ka tafantahay
Shirar uga socda Beesha Murusade magaalada Muqdisho ayeey kaga soo horjeesteen xaaraana ku tilmaameen awood qeybsiga Baarlamaanka maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya ee dhawaan lagu dhisay Magaalada Baydhabo.
Beeshu markey qiimeysay maamuuska iyo maqaamka ay ku leedahay Deegaanada Koofur Galbeed iyo ka mid ahaan shiyaha hormuudka beelaha dega Gobolka Shabellaha Hoose, iyo taariikhda Gobolkaasi beeshu ku leedahay ilaa in ka badan shan boqol oo sano iyo dadaalka ay beeshu ku bixisay dhismaha maamulka Koofur Galbeed oo ay u arkeysay mid mideynkara bulshada sedexda gobol ayeey u cuntumiwaayeen Baarlamaan ku sheeg uu magaalada Baydhabo si aan gabasho laheyn uu awood sharci daro ku maamulay madaxweynaha koofur Galbeed.
Beeshu waxa ay xaq u leedahay in awood qeybsiga beelaha dega deegaanka koofur Galbeed ay hesho, balse taasi ma dhicin oo waxaa dhacday in madaxweyne Shariif Xasan uu maroorsado baarlamaanka isaguna sida uu doono u soo xulo.
Waxaa ka daran oo dhacda in Ihaano uu u geystay Beesha Murusade isagoo Hal xildhibaan ka siiyay Baarlamaanka, sheegayna in Xildhibaan kale oo isagu shaxaad u siinyay Murusade, taasi oo ah ihaano iyo meel ka dhac weyn.
Beeshu waxay door muhiim ah ku leedahay Deegaanada Koofur Galbeed, tusaale xildhibaanadii ka soo geli jiray gobolka Shabellaha Hoose Baarlamaanka Dhexe door firfircoon oo muuqdo ayeey beeshu ku laheyd.
Deegaanada Beesha Murusade ka Degto iyo kuwa beelo kale ay deegaanka la yihiin ee lagu yaqaano waxaa kamid, Afar Buulo Murusade, Doondheere, Ceel-Ure, Tixsiile, Beladul Amiin, Doonka, Buulomareer, Gandaawi, Maryangubaay, Farxaane iyo degmooyinkaan: Afgooye, Baraawe, Janaale, Qoryooley, Marko, Kuntuwaarey, Shalanbood, iyo Magaalada Diinsoor.
Hadaba Falanqeyn dheer kadib: dhaqanka, siyaasiyiinta, xildhibaanada, ganacsatada iyo dhalinyarada beeshu waxa ey isku raaceen qodobada soo socda;
1. Beeshu waxa ay go’aansatay in uusan u qaadmin Ihaanada Shariif Xasan uu ku qeybiyay, diyaarna aysan u aheyn in ay uga qeybgasho maamulka Koofur galbeed.
2. Beeshu waxa ay u cadeynaysaa Dowladda Dhexe, Beesha Caalamka, in aaney Beeshu ka tageyn xaqeeda, wado kastaana ay u mareyso raadintiisa.
3. Beeshu waxa ay isku raacday in aysan la shaqeyn doonin waxna ku darsan doonin maamulkaas cadaalad darada ku dhisan.
4. Beeshu waxa ay ugu baaqeysaa Beelaha Deegaanka Koofur Galbeed in nabada iyo deganaasha la ilaaliyo cadaalada darada keeni karta kala tagana laga hortago.
5. Beeshu waxay fareysaa dhamaan dadka xubnaha ka ah Maamulka koofur galbeed in joojiyaan shaqooyinka ay hayaan.
6. Dhamaan Jaaliyaha Beesha Murusade ee Dalka iyo Dibada Beeshu waxay fareysaa in muujiyaan dareenkooda oo ay ku soo biiraan kulamada ka socda magaalada Muqdisho ee aragtida beesha raadinta xaqeeda looga hadlayo.
7. Beeshu waxey cadeynaysaa in hadii wax laga qaban waayo gardaradan ay si deg deg u sameyneyso tilaabooyin ay xaqooda ku raadsanayaan.
Ugu danbeyn beesha Murusade/Karanle mas’uul kama aha wixii ka dhasha dhismaha maamulka Koofur Galbeed.